Tombony sy fomba fampiharana loko amin'ny marika manokana | Famoronana an-tserasera
Ankoatra ny fananana tsara fitaovana sy loharanom-pahalalana sary Mamolavola sary, infografika, volavola ary habaka manokana, iray amin'ireo lahasa lehibe tokony hataon'ny matihanina marketing na mpanao endrika sary rehetra ny fahalalana. ny fomba tokony hampiasanao loko.
Rehefa mampiasa tsy mitovy loko mitambatra, ny tetikady marketing dia azo hamafisina, satria ny fampiasana loko maro mampitombo ny fankatoavana 80% fa afaka manana marika manokana ianao, izay manafaingana ny fizotry ny fametrahana ny marikao ao an-tsain'ny mpanjifa.
1 Loko amin'ny sarin'orinasa sy ny tombony azo avy amin'izany
1.1 Miovaova arakaraka ny fahitana
1.2 Izy io dia tsy maintsy mifandraika amin'ny toetran'ny marika
1.3 Ny dikany dia mety hiova arakaraka ny tonony
1.4 Ny dikan'ny loko
Loko amin'ny sarin'orinasa sy ny tombony azo avy amin'izany
Tombontsoa maro azo azo avy amin'ny fampiasana araka ny tokony ho izy ny tonony, satria amin'izany dia azo atao ny manarona singa telo tena ilaina amin'ny fahombiazan'ny orinasa, izay:
Fampitana ny fihetseham-po amin'ny alàlan'ny fiatraikany amin'ny fahitana.
Mitovy amin'ireo sombin-tsokajy nokendrena.
Ankehitriny, alohan'ny hiresahana aminao loko sy ny dikan'ny tsirairay, hiresaka lafin-javatra maro ilaina izahay hahalalana ny fomba ahafahan'ny tsirairay miavaka ny sarin'ny orinasa amin'ny alàlan'ny fampiasana loko:
Miovaova arakaraka ny fahitana
Ilaina ny mandray an-tsaina fa ny loko manana dikany manokana, miankina amin'ny anton-javatra ivelany samihafa, izay tompon'andraikitra amin'ny fahitana ny olona ny fiatraikany amin'ny fomba amin'ny fomba hafa tanteraka.
Ny sasany amin'ireny lafin-javatra ivelany ireny dia manova ny fomba fijeriny, miankina amin'ny tsirairay ary matetika: safidy sy tsiro ara-tsosialy, ny tontolon'ny kolontsaina, ny fironana, ary ny vokatra ara-batana aza.
Izy io dia tsy maintsy mifandraika amin'ny toetran'ny marika
Raha mila ny sarin'ny orinasanao ianao ampitao ny toetran'ny marika, ilaina fa ny loko ampiasainao amin'ny endrika orinasa sy fampiroboroboana dia misy ifandraisany amin'ny toetran'ny orinasa, mety amin'ny alàlan'ny tsiron'ny mpihaino kendrena sy / na ny sehatra misy azy io.
Amin'ny alàlan'ny loko afaka mandefa soatoavina samihafa ianao Ary mety ho fantatry ny mpanjifanao mihitsy aza ianao raha toa ka manana endri-tsoratra sasany misongadina kokoa noho ny hafa ny sarin'ny orinasanao.
Ny dikany dia mety hiova arakaraka ny tonony
Ny halavan'ny loko dia mahatonga azy ireo hifandray amin'ny karazan'olona samy hafa, matetika feo mahery vaika kokoaMatetika izy ireo no manome ny sarin'orinasa miaraka amina toetra tsy sahy fotsiny, fa mahavariana ihany koa.
Ny ohatra tsara indrindra azonay omena anao mba hahatakaranao azy dia ny fiheveranao an-tsaina ny loko fluorescent sy mazava izay mampita sary amin'ny ankapobenySamy hafa tanteraka izy ireo amin'izay azonao eritreretina amin'ny loko pastel na paler, izay miteraka fahatsapana fitoniana, firindrana ary fitoniana.
Zava-misy mahaliana momba ny fampiasana loko amin'ny sarin'orinasa:
95% ny orinasa tsy mampiasa alokaloka iray fotsiny na manambatra alokaloka roa farafaharatsiny.
Ny loko mahaliana indrindra dia ny manga, fotsy, maintso, volontany sy volomparasy.
Ny loko tsy mahaliana indrindra dia: voasary, mavo ary mainty.
Ny dikan'ny loko
Ho anao misafidy ny loko mety hampita ny fahatsapana tadiavinao, ambaninao asehontsika ny dikan'ny loko isan-karazany:
Blanco: Ampiasaina amin'ny famolavolana ny marika famantarana mampita tsy fananan-tsiny sy fahatsorana, noho izany dia matetika ampiasaina amin'ny tanjona ara-pahasalamana ho an'ny ankizy sy ny fahasalamana.
Rojo: Ampiasaina matetika amin'ny alàlan'ny fanairana ny filan'ny nofo, na dia ampiasaina ho an'ny mamindra fikomiana sy hetsika.
Azul: Ampiasaina amin'ny logo izy mba hampitana sary manohina tsy ny fahadiovana ihany, fa ny an'ny hery sy faharanitan-tsaina.
volomparasy: Fampitana a fahatsapana haitraitra sy kantoIzy io koa dia ampiasaina tsy tapaka mba hampatsiahy ny tantaram-pitiavana.
mainty: Ampiasaina matetika hanomezana a sary be pitsiny sy tsara kalitao, noho izany dia mazàna ampiasaina amin'ny fampiroboroboana vokatra / entana lafo vidy.
Ary ianao, inona ny loko tianao hisafidianana? Tsarovy izany iray amin'ireo lahasa lehibe izay tokony hataon'ny matihanina marketing na mpanao sary rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Tombony sy fomba fampiharana loko amin'ny marikao manokana